I-Excel Tutorial - Guqula i-Spreadsheet ukufikelela kwiData yeData ka-2010
Ukuguqula i-Excel Spreadsheet kwiData ye-Access Access 2010
Lungisa Iinkcukacha Zakho
ISampuli ye-Excel Database. Mike Chapple
Emva kokuthumela amakhadi akho eholide kunyaka ophelileyo, ngaba wenze isithembiso sokuba uza kulungisa uluhlu lwamakheli ukuze wenze inkqubo ibe lula konyaka ozayo? Ngaba unayo i-spreadsheet enkulu ye-Excel ongenako ukwenza iintloko okanye imisila? Mhlawumbi idilesi yakho yedilesi ibonakala into eboniswe kwifayile engezantsi. Okanye, mhlawumbi, gcina idilesi yakho yeedilesi kwi-(phonsa!).
Ixesha lokuba wenze okuhle kuloo thembiso kuwe-uququze uluhlu lwakho loqhagamshelwano kwiziko le-Microsoft Access database. Kulula kakhulu kunokuba ungacinga kwaye uya kuvuyela iziphumo. Olu qeqesho luya kuhamba phakathi kwenkqubo yonke inyathelo ngamanyathelo.
Ukuba awunayo i-spreadsheet yakho kwaye ufuna ukulandela kunye ne-tutorial, unokukhuphela ifayile yesampuli ye-Excel esetyenziselwa ukudala i-tutorial.
Qaphela : Le tutorial ngu-Ukufikelela ngo-2010. Ukuba usebenzisa i-Access 2010, funda Ukuguqulela i-Excel Spreadsheet kwiDatabase ye-Access 2007 . Ukuba usebenzisa i-Access 2013, funda Ukuguqula i-Excel ukuya kwi-Database Access 2013 .
Yenza iData yeDatha yokuFika kwe-2010
Ngaphandle kokuba unedatha ekhoyo ekhoyo oyisebenzisayo ukugcina ulwazi loqhagamshelwano, mhlawumbi uya kufuna ukudala idata elitsha ukususela ekuqaleni. Ukwenza oku, nqakraza kwi-icon ye-Blank Database kwi-Getting Started nge-Microsoft Office Access. Uya kufakwa kwisikrini esingentla. Ukubonelela ngeenkcukacha zakho ngegama, cofa iqhosha lokudala kwaye uza kuba ushishino.
Qalisa iNkqubo ye-Excel yokungenisa
Emva koko, nqakraza iTebhu yedatha yangaphandle yangaphezulu kwesikrini sokuFinyelela kwaye nqakraza kabini iqhosha le-Excel ukuqalisa inkqubo yokungenisa i-Excel. Isikhundla sale qhosha liboniswe ngcongolo ebomvu kumfanekiso ongentla.
Khetha uMthombo kunye nendawo
Emva koko, uza kuboniswa kwesikrini eboniswe ngasentla. Cofa iqhosha lokuDlulisa uze uphendule kwifayili ongathanda ukuyifaka. Emva kokuba ufumene ifayile echanekileyo, cofa iqhosha lokuvula.
Kwisiqingatha esingaphantsi kwesikrini, unikezelwe ngeendlela zokungena kuzo. Kule tutorial, sinomdla wokuguqula i-spreadsheet esele ikhona kwi-database ye-Access entsha, ngoko ke siya kukhetha "Ngenisa idatha yedatha kwitafile entsha kwi-database yangoku."
Ezinye iinketho kule sikrini zivumela ukuba:
Qhagamshelana nedatha yakho kwi-Excel sheet ukwenzela ukuba utshintsho kwiphepha lomthombo lubonakaliswe kwisiseko sedatha
Ngenisa idatha kwitafile yedata ekhoyo
Emva kokuba ukhethe ifayile echanekileyo kunye nenketho, nqakraza iqhosha le-OK ukuqhubeka.
Khetha Iimviwo zekholomu
Ngokuqhelekileyo, abasebenzisi beMicrosoft Excel basebenzisa umqolo wokuqala wespredishithi zabo ukubonelela ngamagama ekholomu yedatha yabo. Kwimizekelo yethu yefayile, senze oku ukuchonga iGama lokugqibela, igama lokuqala, idilesi, njl. Kwifestile eboniswe ngasentla, qinisekisa ukuba "Inkundla yokuqala iqulethe iikhompyutheni zeHlomelo" ibhekishwe. Oku kuya kufundisa Ukufikelela ukuphatha umqolo wokuqala njengamagama, kunokuba idatha yangempela igcinwe uluhlu lwabafowunelwa. Cofa iqhosha elilandelayo ukuqhubeka.
Yakha naziphi iiNkcukacha ezifunayo
Izikhombo zeenkcukacha ziyimpawu zangaphakathi ezingasetyenziselwa ukwandisa isivinini apho i-Access ingafumana ulwazi kwi-database yakho. Unokufaka isalathisi kwisinye okanye ezininzi kwiikholeji zeenkcukacha zakho kule nyathelo. Chofoza nje imenyu ye-"indexed" ekhethiweyo kwaye ukhethe okukhethiweyo.
Gcina ukhumbule ukuba ii-index zidala ubuninzi be-database yakho kwaye ziyakwandisa inani le-disk space esetyenziswayo. Ngenxa yesi sizathu, ufuna ukugcina iikholomu ezixhaswe kwii-minimum. Kwiziko lethu, siza kukhangela kwi-Igama lokugqibela loothetha nabo, ngoko masenze isalathisi kule ndawo. Singaba nabahlobo negama elifanayo lokugqibela, ngoko sifuna ukuvumela ukuphindaphindiweyo apha. Qinisekisa ukuba ikholomu yegama lokugqibela likhethwe kwi-potion ephantsi yeefestile uze ukhethe u-"Ewe (Ulungelelanisa Kulungile") kwimenyu ye-indexed drop-down. Cofa Okulandelayo ukuze uqhubeke.
Khetha iSisiseko esiPrayimari
Isisiseko esisisiseko sisetyenziselwa ukuchonga ngokukodwa amarekodi kwiziko. Indlela elula yokwenza oku kukuvumela ukufikelela kuvelise ikona ephambili. Khetha "Vumela ukuFaka ukongeza ukhiye ophambili" kwaye cinezela Okulandelayo ukuze uqhubeke. Ukuba unomdla ekukhetheni ukhiye wakho oyintloko, ungafuna ukufunda isihloko sethu kwiinkcukacha zedatha.
Gama Itafile Yakho
Udinga ukubonelela ngeFayile kunye negama ukubhekisela kwetafile yakho. Siza kubiza itafile yethu "Ifowuni." Faka oku kummandla ofanelekileyo kwaye nqakraza kwiqhosha eligqityiweyo.
Jonga Iinkcukacha Zakho
Uza kubona isikrini esiphakathi sikubuza ukuba ungathanda ukugcina amanyathelo asetyenziswa ukuthumela idatha yakho. Ukuba akunjalo, qhubela phambili kwaye nqakraza iqhosha leVala.
Emva koko uza kubuyiselwa kwesikrini esisezantsi sekhonkco apho ungayijonga idatha yakho ngokuchofoza kabini kwigama letafile kwicala lasekhohlo. Ndiyakuhalalisela, uye wangenisa ngempumelelo idatha yakho ukusuka kwi-Excel ukuya kuFumaneka!
Indlela yokwenza i-Boxplot
Iigrafu eziqhelekileyo zisetyenziswe kwizibalo
Indlela yokuqhuba uvavanyo lwe-Hypothesis
Iifom zokuprinta kwi-Microsoft Access
Abaqhubi kunye neenkcukacha kwi-Microsoft Access 2013
I-Chinese Mahayana Buddhist Canon
I-Plier-To Fold, Bend
'Ubomi Bokufihla Inyosi' nguSue Monk Kidd - Ukuhlaziywa KweNcwadi
Ingxenye yentetho: Ziziphi iiVebhu?
Imithetho Yeklasi - IsiGqeba soLawulo oluLungileyo lweKlasi
Amanqaku eMculo aseMexican aphezulu
Ukubethelela kukuthetha kwiiLwimi
Iimpawu ZeMnqamlezo - Zithini?
IYunivesithi yakwaJohnson & Wales University - North Miami Admissions
Shintsha i-Car Bushings yakho
6 Ikhupha i Dragon Dragon Z Cosplayers